Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: filana na tsia ny fijoroan’ny mpampihavana | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: filana na tsia ny fijoroan’ny mpampihavana
Malefadefaka raha jerena ny fifandonana eo amin’ny sehatra pôlitika. Azo lazaina aza fa milamina. Tsy mifandanja ny hery, matanjaka ampian’ny fananana fahefana moa izay tafakatra eo amin’ny fitondrana. Ao amin’ny Antenimieran-doholona sisa no any amin’ny mpifaninana, izay mbola tsy nanambara azy ho mpanohitra ny fahamaroana an’isa.
Handrakandrana fifandonana toy ny fanaovana sangisangy no hany niseho tamin’ny fotoam-pivoriana farany teo. Tsy araky ny nampoizin’ny maro, fa tsy nisy nihoraka ny loholona fa nandany avokoa ny lalàna fanomezana fahefana feno ho an’ny Filohampirenena momba ny hahafahany hanapaka irery ny lalàna, amin’ny fandraisana ôrdônansy.
Asa na sangy fandrahonana na fitsapana ny alalin’ny rano, fa nahozongozon’ny «mpomba ny fitondrana» ny Birao maharitra mpitantana io antenimiera io. Tsy nahomby iny tetika iny, fa tafita ny hafatra… Na misy aza moa ny fifampitsapana hery any aoriana, ao anatin’ny lahatra mifehy ny raharaha pôlitika izany, andaniny ny fitondrana, ankilany fanoherana. Amin’izao fotoana izao aza dia efa miketriketrika ny mpanohitra, izay mizarazara anatina vondrona samy hafa. Ao ireo efa nanambara ny fijoroana ho mpanohitra, ao ny miomankomana hisalotra ampahibemaso ny fitafy sy handray ny sata araky ny maha mpanohitra, toy ny voalazan’ny lalampanorenana.
Tsy fanevatevana ny hasin’ny fihavanana, sanatria, fa tsy hita izay antony ilana izany fampihavanana izany eo amin’ny sehatra pôlitika amin’izao fotoana izao. Fifaninanana afaka hirona hatrany amin’ny fifampirafesana ny fanaovana pôlitika. Na eo amin’ny samy mpihinana aza dia tsy ilaozan’ny fitrangana adiady, mainka fa eo amin’ny fifandraisan’ny mpifaninana. Rehefa tsy sangy mihoatra ny loha na tsy fanotana amina fandikana lalàna, fihetsika samy mamoafady mitera-doza avokoa, dia tsy misy fahadisona ilana fanarenana eo amin’ny asa fanaovana pôlitika. Anjaran’ny vahoaka no mitsara ny fifaninanana amin’ny alàlan’ny fifidianana.
Marina fa misy farasisa mitory tsy fifankatiavana eto amin’ny fiarahamonina. Kanefa na eny anivon’ny fianakaviambe, na eo antokantrano aza, dia tsy ilaozan’ny fitrangana disadisa. Tsy misy sanatria tena ady an-trano eto amin’ny firenena, ny fotoana mandalo dia ampy handravona ny sorisory. Raha misy fitsitsiana kasaina hatao angamba dia ny tsy fandaniana diso làlana, amin’ny fitazaina rafitra miandraikitra fifampihavanana, no mendrika dinihana. Efa be izay ny lany.